Madaxwayne Farmaajo oo Furay Kalfadhiga Baaralamanka iyo Khudbad uu Jeediyey | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Muqdisho ( Kalshaale ) Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa gaaray Dugsiga Tababarka Ciidanka Booliska Soomaaliyeed ee Jeneraal Kaahiye, si uu u furo kalfadhiga 6-aad ee Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
Mudaneyaal iyo Marwooyin, Sharciyada aan saxiixay waxaa ka mid ah sharciga la dagaallanka Musuqmaasuqa oo gundhig u ah aasaasidda qarannimo Soomaaliyeed oo taaba gasha. Shuruucda aan saxiixay iyo kuwa kale ee idin horyaalaba waxay muhiim u yihiin taaba-gelinta qarannimo Soomaaliyeed oo hana qaadda.
Hadal Jeedinta Madaxweynaha ee furitaanka kalfadhiga 6-aad ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
Mudanayaal iyo marwooyin, waxa Alle mahaddiis dhawaan noo soo gabageboobay shirkii dib-u-heshiisiinta ee Galmudug, natiijada aan ka gaarnay dib-u- heshiisiintuna waxay noo fududaysay inaan hadda u gudbayno sidii aan u dhisi lahayn maamul goboleed ay yeeshaan ummadda Soomaaliyeed ee ku nool goboladaas.
Huul Somaliya.Waxaa da’aya Gu’gii guusha Somaliya.Maansha Allaah.
No Gabre,no Tegree,no Dabadhilif iyo kaba qaad.
Somaliya oo kabaheedii gashatay.Dawladnimada Caasimada ayaa mihiim u ah.
Masha allah waa guul somaliyeed madaxwayne
Mahadsanid kol hadaad runta u sheegtay kuwa hor
Taagan in QARANKA dhaqaaqo madaxwaynaha
Wuxuu yiri waa dhamaday waqtigii dadkan xoog lagu
Xukumi jiray iyo awr kacsi … yacni waqtigii qabiilka
Iyo jaha wareerka somaliya way ka baxday guul
Waxaan hamblyo u dirayaa wadaniyiinta somaliyed
Waxaan fariin u dirayaa kuwa federalka sida qaldan
Uqaatay …. dadkiina u Tura oo dowladiina garab
Waa xoolo marna la xaraynayo mara ooda laga qaadayo.kkk